Hanjabaadii Nasri iyo Kompany oo Beenoobay Iyo City Oo Laga Reebay Champions League
Hanjabaadii ciyaaryahanada kooxda Manchester City ayaa noqday biyo col dhaanshay , kadib markii ay Barcelona markale ku dubatay gagida Nou Camp habeenkii xallay ahaa , sidaasna City ku weyday rajo kasta oo ay ka qabtay inay markale iska soo beddo guuldaradii 2-0 ka ahayd ee hore gurigooda ugu Soo martay.
Kooxda Barcelona ayaa 2-1 gool kaga badisay City , una gudubtay wareega 8 da ee horyaalka ugu xamaasada iyo siixaha badan ee naadiyada Qaarada Yurub.
Gool ka dhashay khalkhal ku yimid Difaaca Manchester City , oo uu si qurux badan u dhamaystiray wiilka Mucjisada ah ee Messi iyo mid labaad oo uu raaciyey Dani Alvez ayaa u quus gooyey , rajadii City ee soo noolaatay kadib markii ay keensadeen gool barbar dhac ka dhigay ciyaarta oo uu u dhaliyey Vincent Company.
Xidigaha Samir Nasri iyo Kompany ayaa kulanka ka hor ku hanjabay inay faa’iido kala soo noqon doonaan Spain , laakiin taas waxa beeneeyey weerarkii aan kala go’a lahayn ee ay kala hortimid Barca , iyo difaacii Catalanka ee xallay aad moodaysay inay qabeen dardaaranka.
Kooxda City ayaa calaamada casaanka ah laga siiyey , difaacyahan Pablo Zapaleta, oo ka xanaaqay khalad rigoodhe u muuqday oo loo qaban waayay daqiiqadii 78 aad ee ciyaarta.
Kooxda Barcelona ayaa is aragii hore ee lagu ciyaaray ku soo badisay 2-0 , natiijadii xallayna ay celceliska guusha ka dhigtay 4 iyo 1.
Waxa kale oo iyana Xallay u gudbay wareega 8 da ee Horyaalka Yurub kooxda Faransiiska ah ee PSG oo markale guuldaro u xambaarisay dhigeeda Garmalka ee Bayern Leverkusen oo ay kaga badisay 2 iyo 1.
Kooxda Paris Saint German ayaa is aragii hore oo lagu ciyaaray guriga kooxda Germalka ah ku soo badisay 4-0, celceliska goolasha ay ku baxdayna waxay noqdeen 6-1 .
Xidiga Swedishka ah ee Ibrahimovic ayaan wax gool ah dhalinin habeen kii xallay ahaa, oo haddii uu shabaqa taabsiin lahaa gool ka dhigi lahayd goolasha uu horyaalka Yurub ee sanadkan ka dhaliyey 11 gool sidaasna uu ku barbarayn lahaa , weeraryahanka Real Madrid ee Ronaldo oo ah ciyaaryahanka kaalinta koowaad ku jira , isagoo leh 11 gool.
“Wakiilka Bale waa doqon hadal badan.”
Ronaldo Iyo Bale Oo La Xaqiijiyey Inay Ku Dhaawacmeen Ciyaartii Bayern Munich Iyo Kulamada Ay Maqnaan Karayaan
Jose Mourinho Oo Wada-hadallo La Bilaabay PSG Iyo Damacii Manchester Oo Laalmay
Ku Soo Dhawaada Makhaayadda Cusub Ee Messi Iyo Magaaladda Barcelona + Sawirro
Messi Oo Farriin Qiiro Leh Ku Sagootiyey Neymar: ‘Nasiib Wanaagsan Ayaan Kuu Rajaynayaa’
Arturo Vidal Oo Indhaha U Jeexay Xulkiisa Kulankii Furitaanka Copa America